Maxaa Laga Bartay Kulankii Uruguay ay ka Reebtay Koobka Adduunka Dhigooda Portugal – Gool FM
( Russia ) 30 Juunyo 2018. Uruguay ayaa iska xaadirisay wareega siddeeda ee koobka adduunka markii ay 2-1 kaga badiyeen Portugal.
Labada gool oo caaqiba lahaa oo uu kala dhaliyay labad qeeyb ee kulanka Edisin Cavani ayaa Uruguay ay ku xaqiijisay guusha ay ka gaartay xulka heysta koobka yurub ee Portugal,
Guuldara soo gaartay Ronaldo ayay ka dhigan tahay inuu cayaaray koobkii ugu dmabeyay ee adduunka.
Hadaba Maxa Laga bartay dheeshan.
Ma jiro midkoodna Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi oo gool ka dhaliyay kulamada bug baxda koobka adduunka:
Ronaldo: 0 gool lix kulan 25 shuud isagoo dheelay 514 daqiiqo.
Messi: 0 gool siddeed kulan 23 shuud isaga wuxuu dheelay 756 daqiiqo.
Cristiano Ronaldo ayaa isku dayay lix shuud dheesha caawa ee Portugal mid kamida ayaa ku aaday goolka; wuxuuna kaga darbooyin badanaa cayaarta dhamaan inta darbo oo ay sameyeen Uruguay oo shan shuuda.
10 gool ayaa maanta la iska dhaliyay koobka adduunka; waa goolashii ugu badnaa ee la dhaliyo heerka bux baxda tartanka tan iyo 17 June 1970, markaa oo labadii dheel ee afar dhamaadka la iska dhaliyay 11 gool.
Goolka Pepe uu u dhaliyay Portugal ayaa soo afjaray 597 daqiiqo oo aan gool laga dhalin Uruguay, markii u dambeysana waxay aheyn bishii November 2017 cayaar ay la dheelen Austria.
Cristiano Ronaldo ayaa kubbadda taabay qeybta hore 24 jeer laakiin mid kamida kuma uusan taabay diilinta ganaaxa Uruguay.
Tan iyo 1966, kaliya Grzegorz Lato & Andrzej Szarmach oo si wada jira shan gool ugu dhaliyay Poland iyo Michael Ballack & Miroslav Klose oo iyaguna 5 u dhaliyay Germany marka la isku daro goolashoda ay ka dhaliyaan hal koon adduunka iminka waxaa rikoodhkaas la mid noqday Edinson Cavani & Luis Suarez oo shan gool u dhaliyay Uruguay ilaa haatan koobka adduunka.
Luis Suárez ayaa hadda abuuray caawintii 12-aad uu gool ka caawiyay Edinson Cavani waxayna ka dhigan tahay 27 % boqolkiisa goolasha guud ahaan Cavani ee 44 gool uu sida dhigay.
Tani waa kulankii 38-aad uu Cristiano Ronaldo saftay tartamada waa weyn sida koobka adduunka iyo koobka Euro – mana jiro cayaariyahan kaga badan wuxuuna lamid noqday laacibkii Germany Bastian Schweinsteiger oo sido kale 38 kulan dheelay.
France vs Uruguay (Goorma ayaa la ciyaarayaa kulankaan ka tirsan Quarter-Final-ka koobka adduunka?)